सुत्नका लागि कस्तो पोजिसन उचित ? – korea pati
October 14, 2020 Korea patiLeaveaComment on सुत्नका लागि कस्तो पोजिसन उचित ?
सुत्नु पनि जीवनशैलीकै एउटा हिस्सा हो । हामी कसरी सुत्छौं वा कुन आसनमा सुत्छौं, कतिबेला सुत्छौं भन्ने कुराको सोझो सरोकार हाम्रो स्वास्थ्यसँग रहन्छ ।
सबैजनाको सुत्ने स्थिति एकनास हुँदैन । कोही कोल्टो परेर सुत्छन्, कोही उत्तानो, कोही घोप्टो परेर । सुत्ने समय पनि एकरुपता पाइँदैन । कोही राती चाडै सुत्छन्, कोही अबेरसम्म बस्छन् ।
बायाँतर्फ ढल्किएर सुत्दा पेट सहि हुन्छ, थकान हट्छ, पेट फुल्दैन र शरीरका अन्य समस्या पनि हट्छ । दाहिनेतर्फ फर्केर सुत्दा भने शरीरलाई असर पुग्छ ।Onlinekhabar
शनिवार कोरिया आएका थप २ नेपाली विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, शनिवार यता थपिने संक्रमित विद्यार्थी १७ पुगे